Dagaalkii Garbahaarey oo istaagay, mid ka mid saraakiisha ciidanka dawladda ee aagaasi oo Daljir u warramay. – Radio Daljir
Dagaalkii Garbahaarey oo istaagay, mid ka mid saraakiisha ciidanka dawladda ee aagaasi oo Daljir u warramay.
Garbahaarey, May, 02 – Dagaalkii xalay ilaa saaka ku dhexmarayey ciidanka dawladda iyo Al-shabaab degmada Garbahaarey ee xarunta gobolka Gedo ayaa goor dhawayd istaagay, waxaana uu gaystay khasaare xooggan.
Cabdi Maxamed Nuur oo ka mid saraakiisha hoggaaminaya ciidanka dawladda ee dagaalkaasi ku jira ayaa waraysi uu siiyey idaacadda Daljir ku sheegay inay khasaare lixaad leh ay gaarsiiyeen ciidanka Shabaabka oo ay ka dileen in ka badan 30 ruux, ayna ka qabsadeen labo gaari oo kuwa dagaalka ah midna ay gubeen.
Waxa uu sheegey sarkaalku in dhinaca dawladda uu hal askari ka dhintay balse ay ka dhaawacmeen askar badan oo qaar kood xaaladoodu liidato, hase yeeshee warar madax banaan ayaa sheegaya in khasaaraha gaaray ciidanka dawladda uu intaasi ka badan yahay.
Sarkaalka u hadlay dawladda waxa uu sheegay inaysan jirin dad shacab ah oo dagaalkaasi wax ku noqday goobta dagaalkuna ay ka baxsantahay magaalada,mana jiro war la xiriira dagaalkaasi oo ka soo baxay ururka Al-shabaab.